Apple Pay any Espana dia efa akaiky misy | Vaovao momba ny gadget
Apple Pay any Espana dia efa akaiky misy
Efa ela loatra isika no niaraka tamin'ny vaovao momba ny famoahana ofisialy ny Apple Pay ary marina fa manana fotoana itazonana ny teniny ny orinasa ny serivisy fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny teknolojia NFC misy amin'ity taona ity any Espana. Rehefa notaterina ny valim-bolan'ny orinasa tamin'ity telovolana ity dia mazava fa hipoitra ny fanontaniana momba ny fotoana hanombohan'izy ireo ny serivisy any Espana, ary ny tale jeneralin'i Apple mihitsy Nivoaka i Tim Cook nanazava fa ho tonga izy amin'ny volana ho avy.
Ity dia zavatra fantatry ny rehetra na saika ny mpampiasa ny marika na mazava momba azy avokoa, saingy tsy nifanaraka ilay hevitra satria tsy nanao risika tamin'ny daty manokana izy ireo. Na dia efa elaela teto amin'ny firenentsika aza ny fifaninanana Samsung Pay dia manohitra ihany ny an'i Apple.
Tokony hazava tsara izany ho tonga antoka ity serivisy ity Ary tsy vao sambany no nohamafisin'ny orinasa tamin'ny fomba ofisialy izy io, saingy tsy misy data mivaingana na ofisialy momba ny antony ilan'ny fotoana lava ahatongavana azy. Ny haino aman-jery sasany dia manondro mivantana ireo orinasam-bola ho tompon'antoka lehibe amin'izany toe-javatra izany, saingy miharihary fa raha manana fomba hafa mitovy amin'izany isika ankehitriny, dia tsy ny banky no tompon'andraikitra rehetra ... Na izany na tsy izany, antenaina fa ity Ny olana dia ho voavaha faran'izay haingana. ary esory ny fandefasana an'io serivisy io fa tsikelikely nefa haingana dia haingana dia tonga amin'ny firenena maro, anisan'izany ny firenena manodidina antsika France telo volana lasa izay ary ny farany dia Japon.
Ny sasany dia maniry ny hahita izany rehetra izany satria any Espana dia manana iray amin'ireo taha-kaonty fametrahana data tsara indrindra nomanina ho an'ity karazana fandoavam-bola avy amin'ny fitaovana miaraka amin'ny NFC ity izahay, saingy toa tsy manam-bintana izahay amin'ny fifampiraharahana misy eo amin'ny orinasa sy ny Apple ihany koa ankoatry ny fananany ny sisa amin'ny serivisy an'ny orinasa hafa voafetra ihany amin'ny lafiny banky arosony safidy azo antoka sy haingana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Apple Pay any Espana dia efa akaiky misy
Fanontana voalohany an'ny Samsung Galaxy A5 (2017)